DEG DEG+DHAGAYSO:Ciidamo cusub oo la wareegay magaalada Laascaanood & Cutubyo ka tirsan Ciidamada RRU oo kusoo wajahan dagaalka Tukaraq + Muuse Biixi oo…. – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home 2018 July W.Gudaha, Wararka Maanta DEG DEG+DHAGAYSO:Ciidamo cusub oo la wareegay magaalada Laascaanood & Cutubyo ka tirsan Ciidamada RRU oo kusoo wajahan dagaalka Tukaraq + Muuse Biixi oo….
DEG DEG+DHAGAYSO:Ciidamo cusub oo la wareegay magaalada Laascaanood & Cutubyo ka tirsan Ciidamada RRU oo kusoo wajahan dagaalka Tukaraq + Muuse Biixi oo….
TUKARAQ(P-TIMES)- Wararka Puntlandtimes.com ay ka helayso magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in guud ahaanba amaanka guud ee magaalada Laascaanood ay la wareegeen ciidamo hor leh oo ka tirsan kuwa maamulka Somaliland. RIIX HALKAN OO KA DHAGAYSO WARKAAS OO DHAN
4 thoughts on “DEG DEG+DHAGAYSO:Ciidamo cusub oo la wareegay magaalada Laascaanood & Cutubyo ka tirsan Ciidamada RRU oo kusoo wajahan dagaalka Tukaraq + Muuse Biixi oo….”
Guluf July 8, 2018 at 12:10 am · Edit
Puntland waa inay musa shaani laascaano udiidaan. Waa Inuu markuu hargaysa kasoo Dhaqaalo cida mada tukaraq dhaafaan. Hadii kale anight cidanka Ii dhiiba muse Anaa soo qaban. Waan aqaan qaabka loo qabto wuxuushkan.
Omar sharif July 8, 2018 at 12:44 am · Edit
Puntland waxaa moodaa davaalkeedii inuu isugu soo biyo shubtey tv yada. Meeyey zoreybtii gobolka sool ma saam bey ku soo ilaatey. Adeerayaakoow naga daaya marin habaabinta aad nagu wadaan ama ficil ama usa xiixa gobolka sool dhamaantiis.
Halgan July 8, 2018 at 7:19 am · Edit
Madaxda puntland siiba kuwa madaxweynaha qabta go aan malaha 11 sano waxbaa laxorayn jaanis kii uguwayn aa. Horgalada waa 10 nin bay uyeeraysan waayeen. Halka jeegaanta. Lacagsii so Marka puntland siiba. Faroole gaas way gacan adag yihiin. Iskuna kalsoona baqdin hoosaad kujirata. Shacabka ciidanka way niyad jabiyaan idoorka. Way kabaqaan. Jaaniska Gaas iyo cameey soo maray. Mardanbe heli ma ayaan. Iyo shacab isku duuban. Wana taariikh darood tii ugu xumayd. Waliba hartiga. Buugtaa lagu qorayaa. Gaas isagoo leh mashruuc. Iyo hay ad baan lashiran buu waqtiga ka dhamaan. Allaah ha unaxariisto cabdulaahi yusuf Geesi buu ahaa aan cadawga I jilicsan ay n. Waxaa kadanbeeya y kuwa qof mucaarada ama horgale aan lahadli karin. Walee hadii gaalkcyo laqabsado inuu San difaac een gaas .saa shacabkii laascaanood.garoowe uyeedhay bay garoowe fadhiyaan. Cajiib cajiib cajiib
wahab loyal July 8, 2018 at 9:04 am · Edit
meeshatan dagaali kama socdee wax run ah malahaaya